Coronavirus နဲ့ တက်ကသိုလျ/ကောလိပျတှရေဲ့အခွအေနေ။ – SoShwe
Home/Education/Coronavirus နဲ့ တက်ကသိုလျ/ကောလိပျတှရေဲ့အခွအေနေ။
Coronavirus နဲ့ တက်ကသိုလျ/ကောလိပျတှရေဲ့အခွအေနေ။
Coronavirus ဟာ လှနျခဲ့တဲ့၂၀၁၉ ခုနှဈဒီဇငျဘာလမှာ တရုတျနိုငျငံ ဝူဟနျမွို့မှာစတငျဖွဈပှားခဲ့ပါတယျ။ သိပျမကွာခငျမှာပဲ နိုငျငံတဈဝှမျးကို ကူးစကျပြံ့နှံ့သှားပွီး ယခုလကျရှိ စဈတမျးကောကျခကျြအရဆိုရငျတော့ အဆိုပါဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ သဆေုံးသူအမြားအပွားရှိနပွေီး ကူးစကျခံရသူလညျး အမြားအပွားရှိနပေါတယျ။ လူသားတှရေဲ့အသကျကို အန်တရာယျပွုလာတဲ့ Coronavirus ဟာ နိုငျငံအသီးသီးရဲ့ စီးပှားရေး ၊ လူမှုရေးနဲ့ ပညာရေးတှကေို အတျောအတနျထိခိုကျစလောပါတယျ။
နိုငျငံတကာမှာရှိတဲ့ ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနအသီးသီးက Coronavirus ပွနျ့ပှားနှုနျးဟာ လူသူထူထပျတဲ့နရောမှာ ပိုမိုမွနျဆနျတာကွောငျ့ နိုငျငံသူနိုငျငံသားတှအေနနေဲ့ လူစုလူဝေးကို ရှောငျသငျ့ကွောငျး အသိပေးပွီးနောကျမှာတော့ စာသငျကြောငျးတှေ၊ လူစညျကားရာအရပျမှာရှိတဲ့ စားသောကျဆိုငျတှနေဲ့ စြေးတှကေို အခြိနျကာလတဈခုထိ ပိတျထားတာမြိုးပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။
လှနျခဲ့တဲ့ရကျသတ်တပတျအတှငျးမှာ ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့အစညျး (World Health Organization) က COVID -19 နဲ့ ပတျသကျပွီး “Pandemic” ဆိုတဲ့အသုံးအနှုနျးကို သုံးပွီးကွငွောခဲ့ပါတယျ။ “Pandemic” ရဲ့ အဓိပ်ပါယျက အဆိုပါရောဂါဟာ ဘယျလောကျပွငျးထနျကွောငျးကို ဆိုလိုခွငျးမဟုတျပဲ အဆိုပါရောဂါဟာ ကပျရောဂါဆိုးကွီးဖွဈပွီး ကမ်ဘာတဈဝှမျးက နရောအနှံ့အပွားမှာ ကူးစကျနပွေီဖွဈကွောငျး ဆိုလိုခွငျး ဖွဈပါတယျ။
ကောလိပျကြောငျးတှနေဲ့ တက်ကသိုလျတှမှေ ပါမောက်ခခြုပျတှေ၊ ကြောငျးအုပျတှဟော ကြောငျးသူကြောငျးသားတှကေို ကြောငျးဝနျးအတှငျး မလာဖို့အတှကျ ယာယီအမိနျ့ခမြှတျခဲ့ရပါတယျ။ ရောဂါကူးစကျမှုက ဆိုးရှားနသေေးတာကွောငျ့ ကြောငျးသူကြောငျးသားတှအေနနေဲ့ ဘယျအခြိနျရောကျမှ ကြောငျးကိုလာနိုငျမလဲဆိုတာကို အတိအကမြသိရသေးသလို ပညာရေးဝနျကွီးဌာနအနနေဲ့လညျး တိကသြခြောတဲ့ အဖွမြေိုးကိုမပေးနိုငျသေးပါဘူး။
ရောဂါနှိမျနှငျးရေးနဲ့ကာကှယျရေးအဖှဲ့အစညျးတှကေလညျး Coronavirus ကူးစကျခံရပွီး အဆုတျရောငျရောဂါဖွဈနတေဲ့ ကြောငျးသူကြောငျးသားတှရှေိခဲ့တဲ့ တက်ကသိုလျနဲ့ကောလိပျကြောငျးတှအေပွငျ အဆိုပါရောဂါကူးစကျသူမရှိခဲ့တဲ့ ကြောငျးတှကေိုလညျး ယာယီပိတျထားပဈဖို့ ညှနျကွားခဲ့ပါတယျ။
အမရေိကနျပွညျထောငျစု ပညာရေးဝနျကွီးဌာနက ကြောငျးသူကြောငျးသားမြားရဲ့ ကနျြးမာရေးထိခိုကျမှာကို စိုးရိမျတာကွောငျ့ စာသငျကြောငျးတှေ တက်ကသိုလျတှကေို ယာယီပိတျထားပမေယျ့လညျး အငျတာနကျအသုံးပွုပွီး အှနျလိုငျးကနတေဈဆငျ့ စာသငျကွားနတေဲ့ ကြောငျးသူကြောငျးသားမြားအတှကျ စာသငျကွားမှု အဆကျမပွတျသှားအောငျ ဝဘျဆိုဒျတှကေနတေဆငျ့ဆကျလကျပွီး လလေ့ာသငျကွားနိုငျအောငျ ပွုလုပျပေးထားပါတယျ။
သို့သျောလညျး အဆိုပါအှနျလိုငျးကနေ တက်ကသိုလျကြောငျးရဲ့ ပညာရေးဝဘျဆိုဒျတှကေိုဝငျပွီး ဆကျလကျပညာသငျဖို့အတှကျက အခြို့သောကြောငျးသားတှအေတှကျ လှယျကူပမေယျ့ အခြို့သော ကြောငျးသားတှအေနနေဲ့ အခကျတှနေ့ရေတာမြိုးတှလေညျးရှိပါတယျ။ မညျသညျ့အရာက ကြောငျးသားတှကေို အခကျတှစေ့လေဲဆိုတာကို လလေ့ာကွညျ့လိုကျတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့တှတေကျရောကျနတေဲ့ တက်ကသိုလျကပွုလုပျထားပေးတဲ့ ပညာရေးဝဘျဆိုဒျကိုဝငျဖို့အတှကျ ကောငျးမှနျမွနျဆနျတဲ့ အငျတာနကျလိုငျးကို လိုအပျပါတယျ။ ဒီလိုမြိုးကောငျးမှနျမွနျဆနျတဲ့ အငျတာနကျလိုငျးကို မရရှိတဲ့ ဒသေမှာနထေိုငျနတေဲ့ ကြောငျးသူကြောငျးသားတှအေတှကျ ပညာရေးဝဘျဆိုဒျကနေ ပညာသငျယူဖို့အခကျအခဲတှရှေိနကွေောငျးကိုလညျး သိရှိထားရပါတယျ။
အခြို့သောတက်ကသိုလျကြောငျးတှကေတော့ ကြောငျးသားတှကေို အတနျးထဲမှာ စာသငျနိုငျခှငျ့ကို ပိတျပငျတားမွဈလိုကျပမေယျ့လညျး တက်ကသိုလျကြောငျးထဲဝငျခှငျ့ကိုတော့ မပိတျပငျခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုမြိုးမပိတျပငျခဲ့ခွငျးက ကောငျးမှနျမွနျဆနျတဲ့ အငျတာနကျလိုငျးမရှိတဲ့ဒသေနေ လာရောကျသငျယူတဲ့ ကြောငျးသူကြောငျးသားတှကေို ကြောငျးထဲမှာခြိတျဆကျပေးထားတဲ့ အငျတာနကျလိုငျးကိုအသုံးပွုကာ တက်ကသိုလျကြောငျးဝဘျဆိုဒျထဲဝငျကာ ပညာဆကျလကျသငျယူနိုငျဖို့ အထူးအခှငျ့အရေး ဖနျတီးပေးထားတယျလို့ ယူဆနိုငျပါတယျ။
Coronavirus နဲ့ တက္ကသိုလ်/ကောလိပ်တွေရဲ့အခြေအနေ။
Coronavirus ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့၂၀၁၉ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာ တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့မှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းကို ကူးစက်ပျံ့နှံ့သွားပြီး ယခုလက်ရှိ စစ်တမ်းကောက်ချက်အရဆိုရင်တော့ အဆိုပါဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူအများအပြားရှိနေပြီး ကူးစက်ခံရသူလည်း အများအပြားရှိနေပါတယ်။ လူသားတွေရဲ့အသက်ကို အန္တရာယ်ပြုလာတဲ့ Coronavirus ဟာ နိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ စီးပွားရေး ၊ လူမှုရေးနဲ့ ပညာရေးတွေကို အတော်အတန်ထိခိုက်စေလာပါတယ်။
နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးက Coronavirus ပြန့်ပွားနှုန်းဟာ လူသူထူထပ်တဲ့နေရာမှာ ပိုမိုမြန်ဆန်တာကြောင့် နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ လူစုလူဝေးကို ရှောင်သင့်ကြောင်း အသိပေးပြီးနောက်မှာတော့ စာသင်ကျောင်းတွေ၊ လူစည်ကားရာအရပ်မှာရှိတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ ဈေးတွေကို အချိန်ကာလတစ်ခုထိ ပိတ်ထားတာမျိုးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း (World Health Organization) က COVID -19 နဲ့ ပတ်သက်ပြီး “Pandemic” ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကို သုံးပြီးကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ “Pandemic” ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က အဆိုပါရောဂါဟာ ဘယ်လောက်ပြင်းထန်ကြောင်းကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပဲ အဆိုပါရောဂါဟာ ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက နေရာအနှံ့အပြားမှာ ကူးစက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကောလိပ်ကျောင်းတွေနဲ့ တက္ကသိုလ်တွေမှ ပါမောက္ခချုပ်တွေ၊ ကျောင်းအုပ်တွေဟာ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို ကျောင်းဝန်းအတွင်း မလာဖို့အတွက် ယာယီအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ရောဂါကူးစက်မှုက ဆိုးရွားနေသေးတာကြောင့် ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ ဘယ်အချိန်ရောက်မှ ကျောင်းကိုလာနိုင်မလဲဆိုတာကို အတိအကျမသိရသေးသလို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်း တိကျသေချာတဲ့ အဖြေမျိုးကိုမပေးနိုင်သေးပါဘူး။
ရောဂါနှိမ်နှင်းရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း Coronavirus ကူးစက်ခံရပြီး အဆုတ်ရောင်ရောဂါဖြစ်နေတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရှိခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ်နဲ့ကောလိပ်ကျောင်းတွေအပြင် အဆိုပါရောဂါကူးစက်သူမရှိခဲ့တဲ့ ကျောင်းတွေကိုလည်း ယာယီပိတ်ထားပစ်ဖို့ ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ကျောင်းသူကျောင်းသားများရဲ့ ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှာကို စိုးရိမ်တာကြောင့် စာသင်ကျောင်းတွေ တက္ကသိုလ်တွေကို ယာယီပိတ်ထားပေမယ့်လည်း အင်တာနက်အသုံးပြုပြီး အွန်လိုင်းကနေတစ်ဆင့် စာသင်ကြားနေတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် စာသင်ကြားမှု အဆက်မပြတ်သွားအောင် ဝဘ်ဆိုဒ်တွေကနေတဆင့်ဆက်လက်ပြီး လေ့လာသင်ကြားနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။
သို့သော်လည်း အဆိုပါအွန်လိုင်းကနေ တက္ကသိုလ်ကျောင်းရဲ့ ပညာရေးဝဘ်ဆိုဒ်တွေကိုဝင်ပြီး ဆက်လက်ပညာသင်ဖို့အတွက်က အချို့သောကျောင်းသားတွေအတွက် လွယ်ကူပေမယ့် အချို့သော ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ အခက်တွေ့နေရတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။ မည်သည့်အရာက ကျောင်းသားတွေကို အခက်တွေ့စေလဲဆိုတာကို လေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ သူတို့တွေတက်ရောက်နေတဲ့ တက္ကသိုလ်ကပြုလုပ်ထားပေးတဲ့ ပညာရေးဝဘ်ဆိုဒ်ကိုဝင်ဖို့အတွက် ကောင်းမွန်မြန်ဆန်တဲ့ အင်တာနက်လိုင်းကို လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးကောင်းမွန်မြန်ဆန်တဲ့ အင်တာနက်လိုင်းကို မရရှိတဲ့ ဒေသမှာနေထိုင်နေတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက် ပညာရေးဝဘ်ဆိုဒ်ကနေ ပညာသင်ယူဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေကြောင်းကိုလည်း သိရှိထားရပါတယ်။
အချို့သောတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေကတော့ ကျောင်းသားတွေကို အတန်းထဲမှာ စာသင်နိုင်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်ပေမယ့်လည်း တက္ကသိုလ်ကျောင်းထဲဝင်ခွင့်ကိုတော့ မပိတ်ပင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုမျိုးမပိတ်ပင်ခဲ့ခြင်းက ကောင်းမွန်မြန်ဆန်တဲ့ အင်တာနက်လိုင်းမရှိတဲ့ဒေသနေ လာရောက်သင်ယူတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို ကျောင်းထဲမှာချိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ အင်တာနက်လိုင်းကိုအသုံးပြုကာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝဘ်ဆိုဒ်ထဲဝင်ကာ ပညာဆက်လက်သင်ယူနိုင်ဖို့ အထူးအခွင့်အရေး ဖန်တီးပေးထားတယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။
Previous တက်ကသိုလျစာမေးပှဲဖွဆေိုခှငျ့မရတဲ့ တက်ကသိုလျကြောငျးသားတှအေနနေဲ့ ဘာဆကျလုပျသငျ့လဲ ? ? ?
Next ၂၀၂၀ ခုနှဈအစောပိုငျးမှာပဲ လူကွိုကျမြားခဲ့တဲ့ သီခငျြး (၈) ပုဒျ။